Umgangatho ilebhu ngodongwe yodongwe yoMvelisi ngokuyinyibilikisa | XTL
Umgangatho we-China Wich Assay Deay Dementle Fotmed kunye ne-Gonesia yeProssia Cupel yokulungisa uMfezeli weGolide | Xngtailong
crucibl lab yodongwe kuthelekiswa iimveliso ezifana kwi emarikeni, oko zinezibonelelo ebalaseleyo nanto ngokwemigaqo yokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njalo njalo, kwaye uzakhele waziwa kakuhle market.XTL ishwankathela iintsilelo iimveliso kwixesha elidluleyo, yaye iyaqhuba ukuphucula kuzo. Incazelo ye ngokuyinyibilikisa lab yodongwe ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho.
Laboratory Clay yodongwe Fire Uvavanyo Iziko kakhulu asetyenziswe ucalulo lwemizekelo zentsimbi kunye neesampuli okunyibilika kwiilebhu, iilebhu izimbiwa kunye neelabhoratri mveliso ezahlukeneyo.
Udongwe Iziko --- Uvavanyo Iziko
Oku ikakhulu asetyenziswe ucalulo lwemizekelo zentsimbi kunye neesampuli okunyibilika kwiilebhu, iilebhu izimbiwa kunye neelabhoratri mveliso ezahlukeneyo. Ezi sampuli kunye nezithako azidityaniswa ngokuyinyibilikisa, kwaye experiment yokunyibilikisa yenziwa kwiqondo lobushushu eliphezulu. Le phambili iqhosha ezifunyenwe yi imvula ulwelo koko phantsi nokuhlola elandelayo;
Ukusebenzisa izinto high-high, ukumelana eliphezulu lobushushu, conductivity elungileyo thermal, ngobunyulu eliphezulu ukunyibilika, ukumelana olomeleleyo ngokudleka nobomi inkonzo ende.
Iimpawu: refractoriness High, akukho SLAG, akukho umthondo, akukho genge, nguye lokuqala-class izixhobo abangabancedani ukuba kulingwa umlilo.
Not umxholo ukunikela elilodwa ngokuyinyibilikisa ezilahlwayo, kulingwa crucibles fi re babe waziwa kakuhle nelilifaneleyo amakhonkco ezininzi fi. Olu phawu inika abathengi bethu kunye inzuzo ebalulekileyo yokunciphisa iindleko ngalinye fi ring nokwandisa profitablity.
Mveliso kunye ubuchwepheshe yakutshanje automated liqinisekisiwe solinganiso kokungqinelana nto leyo ebaluleke kunye multi-kugalela iinkqubo kunye imigca ezenzekelayo. Ngelo xesha, zikhethwe ngononophelo izinto ekrwada kunye nokusungulwa isengqiqweni ngakumbi yesoda abuhlungu ephantsi, isiqulatho intsimbi ephantsi kunye nesiqulatho eliphezulu lesilicon ukuba crucibles ukuqinisekisa ukumelana eliphezulu lobushushu ukuya ku 1500 ° C.
ubukhulu Elungiselelweyo kunye neenkonzo ezifumanekayo.
L.O.i (ilahleko kwi-ignition) I-0.21%
Ubungakanani bamatyala eWoodn (mm)
I-QTY / Imeko
I-QTY / 20'FCL
I-XTL-30G 88 I-110 I-250 I-1070 * 1070 * 1080 2310 I-46200
I-XTL-40G 88 135 I-350 I-1110 * 1070 * 1080 Ngo-1980 I-39600
Ittl-45g 88 I-160 I-500 I-1080 * 1170 * 1080 1296 25920
Ittl-45g I-90 155 I-680 I-1140 * 1030 * 1120 1296 25920
I-XTL-50G I-105 I-150 I-700 I-1140 * 1030 * 1120 I-1530 I-30600
I-XTL-65G I-105 165 I-720 I-1140 * 1030 * 1120 I-1425 28500
I-XTL-750 I-120 I-160 I-750 I-1080 * 1170 * 1080 I-900 I-18000
Uhlalutyo lwesinyithi oluxabisekileyo
umba: Iziko Lab ceramic
Uhlobo Process: Rolling udini
Izixhobo: Sio2 + Al2O3
Tolerance: + -2mm
Facility: izixhobo udini Automatic
Izatifikethi: ISO 9001 SGS
Ukuhambisa ngenqanawe: naziphi esitokisini, 5-10days ngeenxa ixesha lokubeleka. elwandle okanye umoya isicelo umthengi
Delivery& Service: ukunikezelwa ngexesha elifanelekileyo ngexesha ngalinye. Ukunika inkonzo enokuthenjwa nenoxanduva umxumi ngamnye kunye imveliso nganye. Ithagethi yethu ukwanelisa wonke umxumi ngenkonzo engcono.
Intanda-bulumko: Ngomgangatho obalaseleyo, inkonzo yeklasi yentsebenzo, ishishini elithembekileyo
Imbali: Thina inkampani kudityaniswe R&D, imveliso kunye neentengiso ngokupheleleyo,
Ixabiso: Iimveliso zethu zithelekisa kakuhle nabanye abarhwebi.
Umgangatho: Sidlule i-IS0 9001: 2005. Imigangatho, izinzile, inokuthenjwa
Kutheni le nto kuthi?
* Umenzi wobungcali ukusukela ngo-1997.
* Ulawulo olusemgangathweni olungqongqo kwimveliso kunye nokunyamezelana.
* Iisampulu zasimahla ziyafumaneka
* Ukuveliswa ngokwezifiso ngokusekwe kumzobo wakho okanye ukucaciswa
* Ukuhanjiswa kwexesha kunye nenkxaso ethembekileyo kunye nenkonzo
* I-inventri ifumaneka ngokuhambisa ngokukhawuleza
* Sigcina imfihlo sayo yonke imizobo kunye nolwazi lweshishini phakathi kwethu.
Ngaba uyinkampani yokurhweba okanye umvelisi?
Ngaba ungabonelela ngeesampulu zasimahla?
* Ewe, sinokunika isampula yasimahla ukuba sinayo kwisitokhwe, kodwa intlawulo yekhuriya iya kuqokelelwa.
Ngaba uyayamkela imveliso eyenzelwe ngokwesiko isekelwe kwinkcazo yethu?
* Ewe, sinikezela nge-OEM kunye nenkonzo ye-ODM. Sithumele nje umzobo wakho ukuba unayo. Ukuba awunayo umzobo, usixelele umbono wakho, siya kukusebenzela umzobo.
Lithini ixesha lokuhanjiswa?
* Iintsuku ezisi-7 zomsebenzi kwiimveliso ezisemgangathweni iintsuku ezingama-30 zeemveliso ezenziwe ngokwezifinyezo.